Daawo:-Madaxweyne Farmaajo oo kusii hakaday Degmadda Carmo Khudbadii uu ka jeediyay Madashii lagu soo dhaweeyay iyo Kaftan-Video | | Horufadhi Online
Daawo:-Madaxweyne Farmaajo oo kusii hakaday Degmadda Carmo Khudbadii uu ka jeediyay Madashii lagu soo dhaweeyay iyo Kaftan-Video
Short URL: http://horufadhimedia.com/?p=55448
1 Comment for “Daawo:-Madaxweyne Farmaajo oo kusii hakaday Degmadda Carmo Khudbadii uu ka jeediyay Madashii lagu soo dhaweeyay iyo Kaftan-Video”
January 11, 2018 - 12:02 pm
Asc. Dee Madaxweynuhu dhulka XORTA ah ee dadkii lahaa ka talinayaan buu booqanayaa.
LAASKA wuu booqan lahaa hadduu XOR yahay oo dadkii lahaa ka talinayaan. Qabiilka kaliya ee Soomaaliya magaalooyinkoodii CAQAAR ama NIIC dhaafsaday waa Dhulbahante (terra fama), haddana SHAAH bay saf ugu jiraan. Waa wax runtii aad loola yaabo.
Qaar baa ku andacooda annagaa Laaska haysanna. Haddaad tiraahdo war ma haysatide ninka aad NIICda ka siisataa kugu haysta oo kugu karbaasha ciddii uu doono oo aad awaamiirtiisa iyo mab’daiisa fulisaa, wuu kula dagaalamayaa. Iyaa, xitaa maba oga in la haysto.
Dirays qabiileed inta loo xiraa meeshii la doono loo didiyaa, qaar kalana wasiirro iyo guddoon baarlamaan REER YARI lee yahaa lagu xiray. Waar yaa waxaas oo kale arkay? Sow inan gumeednimo meeshii ugu danbaysay maaha?
Qaar baan ka daawaday shaashadaha leh “Tukaraq raallaannu ka nahay in la qabsado!” Oo yaad u sheegaysaa? Weliba waa isla qumman yihiin, xishoonba maayaan. Waa NIICdii hore mid kale kadaba gee, deedna SHAAH saf u gal.
Si kastaba, shirkii ragga CAQAARTA AMA NIICDA ku kiraysan lagu soo afjarayay dhakhsuu furmayaa insha Allah. Guddoonka shirka socodkan madaxweynahaa lagu soo afjaray. Wbt